प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना ! मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टरको आइसियूमा उपचार हुँदै::Hamrodamak.com
प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना ! मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टरको आइसियूमा उपचार हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ छ। शनिबारदेखि नै रुघाखोकीले ग्रस्त प्रधानमन्त्री ओली थप समस्या देखिएपछि आइतबार राति महाराजगन्जस्थित मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टरको आइसियूमा भर्ना भएका हुन् ।
अस्पतालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको श्वासप्रश्वास गम्भीर समस्या देखिएको छ । स्वास्थ्यमा आएको समस्याकै कारण शनिबार आयोजित नेकपाको चियापान कार्यक्रममा समेत आोली सहभागी हुनुभएन । संक्रमण बढ्ने सम्भावना भएपछि निजी चिकित्सकको सुझावमा उहाँ प्रधानमन्त्री निवासमै आराम गर्नुभएको थियो ।
सामान्य रुघाखोकी र भाइरल ज्वरोको समस्यामा रहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्वासप्रश्वासमै समस्या आएपछि आइसियूमा भर्ना गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले खोकी नियन्त्रणसहित थप परीक्षणका लागि अस्पताल भनाई भएको जानकारी दिनुभयो । अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार भएको जानकारी पनि दिनुभयो ।